Exynos 9610: ပရီမီယံအဆင့်မြင့်ပရိုဆက်ဆာအသစ် | Androidsis
Samsung Exynos 9610: အတုဥာဏ်ရည်ကိုအလယ်အလတ်တန်းစားသို့ပို့ဆောင်ပေးသောပရိုဆက်ဆာ
Samsung ၏ပရိုဆက်ဆာဌာန နေဆဲယနေ့ကြိုးစားအားထုတ်။ Exynos ပရိုဆက်ဆာများသည်ပတ် ၀ န်းကျင်အားလုံးတွင်ဆက်လက်တိုးတက်နေသည်။ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီကယခုတင်ဆက်သည် သင်၏အသစ် Exynos 9610 ပရိုဆက်ဆာအသစ်။ တစ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တစ် ဦး က Processor ကို Qualcomm ၏ Snapdragon 700 ကိုတုံ့ပြန်မှု။ ပရိုဆက်ဆာများကိုပရီမီယံအလယ်အလတ်တန်းစားဟုခေါ်ဆိုရန်ရည်ရွယ်သည်
ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုစလုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရသည် အတုထောက်လှမ်းရေးရောက်စေဖို့ရှာကြံပရိုဆက်ဆာ ဒီဖုန်းတွေကို အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဤ Exynos 9610 တွင်၎င်းသည်အတုဥာဏ်ရှိလိမ့်မည်ဟုလည်းကြေငြာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းစျေးကွက်တွင်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုဆက်ရှိနေသည်။ အခုမှစ high-end မသာသောဖုန်းများရောက်ရှိ.
ဤ Exynos 9610 သည် Exynos7စီးရီးအတွင်းတွင်ရှိသည်။ အဖြစ်မှန်ကတော့ Galaxy S9 ရဲ့ processor နဲ့ဆင်တူမှုများစွာရှိပေမယ့်၊ Exynos 9810။ ဒါကြောင့်ဖုန်းကိုကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပေးမယ့်အရည်အသွေးမြင့်ပရိုဆက်ဆာကိုတွေ့နိုင်တယ်။ နှစ် ဦး စလုံးမော်ဒယ်များအကြားခြားနားချက်များအနည်းငယ်မျှသာရှိပါတယ်ကတည်းက။
ဒီချစ်ပ်မှာ Core ရှစ်ခုရှိပြီးအမြန်နှုန်း ၂.၃ GHz အထိရှိသည်။ ဒါဟာဒုတိယမျိုးဆက် FinFET ဗိသုကာအပေါ်တည်ဆောက်သည် 10 nanometers။ Samsung ၏အဆိုအရ၎င်း platform သည် multimedia စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သူတို့သွားနေကြသည်အဘို့ အတုထောက်လှမ်းရေးအပေါ်အခြေခံပြီးတစ် ဦး ပရီမီယံအတွေ့အကြုံကိုဆက်ကပ်။ ၎င်းကို DSP ပါ ၀ င်သောကြောင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Exynos 9610 ကို Mount လုပ်သောဖုန်းများတွင်အဆင့်မြင့်ပုံတူပုံရိပ်ရှိသည်။ ဤနည်းလမ်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်မျက်နှာများ၊ အရာဝတ္ထုများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအနိုင်ကျင့်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအရာအလုံးစုံကင်မရာတစ်ခုသုံးပြီး။ Processor ကိုလည်းရှိပါတယ်ပေမယ့် ကင်မရာနှစ်လုံးအတွက်အထောက်အပံ့။ ထို့အပြင်သူတို့သည်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ကြသည် နှေးကွေးစွာအတွက်စံချိန်တင် Full HD resolution ဖြင့် 480 fps နှင့် 4K တွင် 120 fps နှုန်းဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် Galaxy S9 ၏ပရိုဆက်ဆာမှယူထားသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခု။
ဆက်သွယ်မှုအရ ဒီ Exynos 9610 မှာ LTE modem ကိုရှာတယ် ဒေါင်းလုပ်အမြန်နှုန်း 600 Mbps အထိနှင့် upload အမြန်နှုန်း 150 Mbps အထိထောက်ပံ့သည်။ ထို့အပြင်သူတို့ကလိမ့်မည် Wi-Fi 802.11ac2×2MIMO, Bluetooth 5.0 နှင့် FM ရေဒီယို.
ယခုအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီ၏ဤပရိုဆက်ဆာအသစ်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်စျေးကွက်ထဲရောက်မည်ကိုမသိရသေးပါ။ မည်သည့် Samsung ဖုန်းများကဤ Exynos 9610 ကိုတပ်ဆင်မည်မဟုတ်။ ဒါပေမယ့်မကြာခင်မှာပဲဒီအချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သိချင်တယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Samsung Exynos 9610: အတုဥာဏ်ရည်ကိုအလယ်အလတ်တန်းစားသို့ပို့ဆောင်ပေးသောပရိုဆက်ဆာ
Lytro: Pixel ကင်မရာကိုတိုးတက်စေမည့်နည်းပညာ